के तपाईसँग यो कम्पनीको सेयर छ ? जारी गर्दैछ ७६ प्रतिशत बोनस सेयर ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
के तपाईसँग यो कम्पनीको सेयर छ ? जारी गर्दैछ ७६ प्रतिशत बोनस सेयर !
काठमाण्डौं । हकप्रद र बोनस सेयर जारी गर्ने लहड चलिरहेको बेला तीन अन्य कम्पनीले करिब ७६ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेका छन् भने एक कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएकोछ । यसरी बोनस सेयर जारी गर्नेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, ओमी माइक्रोफाइनान्स र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक रहेका छन् ।
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकले २० प्रतिशत लाभांस घोषणा गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांस राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले लाभांस पाउँछन् । बैंकले दुई लाख १० हजार रुपैयाँ कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांस घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, ओमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले २१.११ प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले २० प्रतिशत वोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, सबैभन्दा बढी मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३४ प्रतिशत वोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांस राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले ३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने भएको छ । बैंकको हकप्रद पाउन असोज २८ गतेसम्म सेयर खरीद गरिसक्नु पर्छ ।
१६ असोज २०७३, १२।००